कांग्रेसले हरेक काम देश र जनताका लागि गर्छ, दलीय स्वार्थ छैन : विश्वप्रकाश शर्मा – रिपोर्टर्स नेपाल
२०७६ श्रावण २ बिहीबार, १०:५५
कांग्रेसले हरेक काम देश र जनताका लागि गर्छ, दलीय स्वार्थ छैन : विश्वप्रकाश शर्मा
२०७६ बैशाख ६ गते प्रकाशित, l १२:०६
नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ गतेदेखि राष्ट्रिय जागरण अभियान सुरु गर्दैछ । चुनावमा पराजित भएपछि कमजोर बनेको काग्रेसले जनता माझ गएर के गर्ला ? के कस्ता योजना र एजेण्डा तय गरिएको छ त ? कांग्रेसको विगतदेखि अहिलेसम्मको उचाचढाबका विषयमा ऋषि धमलाले प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले गर्न लागेको जागरण अभियान किन र केका लागि ?
नेपाली कांग्रेसलाई बदलिएको राजनीतिक परिस्थितीमा क्रमशः रुपान्तरित, व्यवस्थित, आधुनिक र सुदृढ बनाउँदै लैजानका लागि जागरण अभियानले योगदान गर्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय राजनीतिका कयौँ मुद्धाहरु, विभिन्न समसामयिक सन्दर्भहरु, सरकारका कमजोरीहरु, स्वदेश र विदेशमा बसेका आम नेपालीका भावनाहरु गाँस्ने काम जागरण अभियानले गर्छ ।
जागरण अभियान गर्दै गर्दा कांग्रेसभित्रको एकता चाँही कहिले हुन्छ ?
पार्टीभित्र अनेक सन्दर्भमा अनेक विमति थिए, छ र रहन्छ । कांग्रेसले विगतमा पनि आफूभित्र अनेक विषयमा विमति हुँदा पनि राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा खरो ढंगले प्रस्तुत गर्न सकेको थियो । कांग्रेसले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सधैँ पूरा गरेको छ । जागरण अभियानको सन्दर्भमा पार्टीभित्र विमति छैन । एउटै एजेण्डा, एउटै स्वरका साथ अभियानमा लाग्दैछौँ ।
जागरण अभियानले पार्टीभित्रको मनमुटाव अन्त्य गर्न भूमिका खेल्छ त ?
हरेक राम्रो कामको सुरुवात हुँदा राम्रा र नराम्रा दुवै तर्क आउँछन् । यो अभियान हामो लागि अवसर हो । यो अभियानले सकारात्मक सोचको विकास गराउँछ । तर अवसरलाई संकटका रुपमा लिइयो भने नकारात्मक तर्क पनि आउन सक्छन् । सबै नेताहरुबीच नै सहमति भएर गर्ने भनिएको अभियानले पक्कै पनि एकताको भावना ल्याउँछ ।
पार्टीभित्रको विवाद त लुकेको छैन नि ?
पार्टीभित्र विवाद हुन्छन् । विवादकै बिच एकता पनि हुन्छ । सबैको मन र मस्तिष्क एकसाथ नमिल्न पनि सक्छ । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवादमा अलमलिनु आवश्यक छैन । यतिबेला हामीले सुरु गर्न लागेको राष्ट्रिय जागरणको छलफल गर्ने समय हो ।
जागरण अभियानकै छलफल गर्ने समय त हो । तर तपाईकै कार्यकर्ताहरु विश्वस्त हुन सकेका छैनन् नि ?
पार्टीभित्रको विवादले सबै कुरा असफल हुन्छ भन्ने होइन । विगतमा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा पनि कांग्रेसभित्र विवाद नै थियो । तर राष्ट्रका लागि गर्नुपर्ने कामका पार्टीभित्रको विवादले कुनै असर गरेन । राजालाई राख्नुपर्छ कि हटाउनुपर्छ भन्ने बेलामा पनि आन्तरिक विवाद नभएको होइन । तर गणतन्त्र स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण विषयमा हामीले विवाद गरेनौँ । संविधान जारी गर्ने कामको पनि कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्यो, त्यो बेला पनि विवाद थियो होला । अहिले पनि त्यस्तै हो । राष्ट्रिय जागरण अभियानलाई आन्तरिक विवादले केही फरक पर्दैन ।
तर कांग्रेस त अहिले कमजोर बनेको छ नि । विगतमा गरेका काम सम्झेर रमाएर मात्रै हुन्छ र ?
हामीलाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ छैन । कांग्रेसले हरेक परिवर्तन राष्ट्र र जनताका लागि गरायो । दलगत स्वार्थ राखेर भन्ने हो भने पक्कै पनि कांग्रेसले धेरै गुमायो होला, तर राष्ट्र र जनताको स्वार्थले हेर्ने हो भने त कांग्रेसले धेरै योगदान दियो नि । ७ सालदेखि नै कांग्रेसले राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको छ । कांगेसका कारण देश र जनताले प्रजातन्त्र पायो । त्यो प्रजातन्त्र कांग्रेसले पनि पायो । शान्ति स्थापना गर्दा देश र जनताले शान्तिको अनुभूति गरे । कांग्रेसले पनि त्यही अनुभूति गर्यो । कांग्रेसले संविधान निर्माणको नेतृत्व गरेर नयाँ संविधान जारी गर्यो । त्यो पनि सबैका लागि भयो । कांग्रेसले चुनाव हार्यो होला, यो कुनै ठूलो कुरा होइन । कहिले हार्ने कहिले जित्ने क्रम चलिरहन्छ ।